Aza miantso ny mpivarotra kamo intsony! | Martech Zone
Alakamisy 17 martsa 2011 Alakamisy Oktobra Oktobra 27, 2011 Douglas Karr
Namaky lahatsoratra iray hafa aho tamin'ity herinandro ity izay nantsoina hoe "kamo" ireo mpivarotra. Toa mpitrandraka indostria tsy varotra foana io izay misarika ilay «halaza» ary tonga amiko ihany io. Lehilahy mandefa mailaka tsy nahavita fampielezan-kevitra niantso ny mpanjifany ho kamo. Mpivarotra varotra finday miresaka momba ny tsy fampiasan'ny mpanjifany ny fangatahany satria kamo izy ireo. Lehilahy media sosialy miresaka momba ny mpivarotra tsy manara-maso na mamaly rehefa voatonona an-tserasera… kamo.
Ka… fotoana hanaovana ny iray amin'ireo saiko.
Ny maha bilaogera, mpandahateny, na koa ilay antsoina hoe "manam-pahaizana" - manam-pahaizana momba ny lohahevitra - dia mora. Afaka mandeha mandehandeha isika ary manondro ny olona amin'ny rantsantanana ary milaza aminy izay zavatra tsy mety ataony. Asa mora izany… sy asa tena tiako. Raha manana fahalalana tsara momba ny indostria ianao dia afaka manampy orinasa marobe nefa tsy tena mihady lalina loatra. Fa mora foana ny milaza amin'ny olona ny zavatra tsy mety ataony raha tsy tena manana andraikitra hanatanteraka sy tompon'andraikitra ianao hahazoana ny valiny.
Tsy mora ny maha mpiasa anao. Mbola sarotra kokoa aza ny maha-marketer azy. Na dia nanatsotra ny tenany aza ny ankamaroan'ny asa nandritra ny taona maro, dia nampiditra fantsona sy mpanelanelana mampihomehy amin'ny takelaka mpivarotra anay izahay. Tamin'ny fotoana iray, ny maha-mpivarotra dia midika fotsiny hoe fitsapana doka iray na roa amin'ny fahitalavitra, amin'ny radio na amin'ny gazety.
Tsy izao intsony… manana mpampita vaovao tsy tambo isaina ao amin'ny media sosialy irery isika - aza hadino ny marketing nentin-drazana sy an-tserasera. Heck, manana valo isika fomba marketing amin'ny telefaona finday fotsiny… SMS, MMS, IVR, mailaka, atiny, doka finday, fampiharana finday ary Bluetooth.
Mandritra izany fotoana izany dia nampiakatra be dia be ny isan'ny mpampita vaovao izahay, ny fomba fanaraha-maso sy ny famakafakana azy ireo, ary ny fomba fanatsarana sy fanatsarana ny tsirairay… ary koa ny fahazoana mpanelanelana iray hanome sakafo ny iray hafa, dia nampihena ny loharano anatiny izay ananan'ny mpivarotra taloha.
Androany, niresaka an-telefaona tamina orinasa mpamantatra lojika iraisam-pirenena aho izay manana tranokala 4 samihafa any amin'ny firenena 4 samy hafa ary ekipa 1… ny tenany. Manantena izy fa hanohy hanatsara ny toerana tsirairay isam-paritra ary hampitombo ny varotra anatiny - tsy misy teti-bola ary tsy misy rafitra fitantanana atiny izay milina fikarohana.
Ny manam-pahaizana momba ny lohahevitra dia tsy manana fivoriana, politika any amin'ny birao, famerenana, famerana ny teti-bola, fetran'ny teknolojia, tsy fahampian'ny loharanon-karena, tsy fitoviana, ary tsy misy loharanom-pahalalana, ary manakana ny fivoarany toy ny ataon'ny mpivarotra. Amin'ny manaraka manapa-kevitra ny hiantso ny mpivarotra iray kamo ianao, makà minitra vitsy ary hamakafaka ny tontolo iainany… azonao tratrarina ve izay ananany?
Miara-miasa amin'ny orinasa sasany aho izay mila drafitra mandritra ny volana maro mba hanovana kely ny lohahevitry ny tranonkala… volana! Ary mitaky fihaonana sy andianà mpitantana tsy mianatra tsy tambo isaina izay mila manombatombana sy mankasitraka ny fizotrany. Ny zava-bitan'ny mpivarotra sasany dia tsy fahagagana amin'izao fotoana izao noho ny fanamby sy ny loharano.
Kitiho amin'ireo mpitsidika vaovao vitsivitsy miaraka amin'i Tynt
Mar 17, 2011 ao amin'ny 11: PM PM
Tonga soa Douglas. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatsapa ny andraikitry ny mpivarotra. Tena tsy mpivarotra aho. Fa tena mankasitraka ny ananany ao amin'ny orinasanay aho. Arahabaina ianao.
Mar 22, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Sarotra tokoa ny ho mpivarotra.